Taona vitsy lasa izay, nanoro hevitra ny mpifanaraka amin'ny tafontrano lehibe iray aho amin'ny fisian'izy ireo an-tserasera. Nanangana sy nanatsara ny tranonkalany izahay, nanangana fampielezan-kevitra mitete hisamborana ary hanomboka hamoaka ny tetikasan'izy ireo an-tserasera. Ny zavatra iray tsy hita anefa dia teo alohan'ny sy aorian'ny sarin'ireo fananana. Tamin'ny alàlan'ny fidirana an-tserasera sy ny rafitra fitantanana ny tetik'asa dia afaka nahita ireo fananana nikatona aho ary rehefa vita ny tetikasa. Rehefa avy
Ny fitsapana ireo haitao farany dia ampahany mahafinaritra amin'ny asako. Mividy teknolojia matetika aho mba hanomezana azy fitsapana fotsiny ary hiantohana fa manaraka hatrany aho. Volana maro lasa izay dia nividy DJI Mavic Air aho ary nanandrana izany niaraka tamin'ny mpanjifa vitsivitsy. Tsy gamer aho, ka harafesina ao ambadiky ny mpanera. Taorian'ny fitsapana azy tamin'ny sidina vitsivitsy dia gaga aho tamin'ny fomba nanidinan'ireo fitaovana ireo ny tenany. Miala ny drôna ary
Ny zoma lasa teo dia niady hevitra lehibe tamin'ny namako iray aho, Bill Hammer. Ny toerany dia ny fananana teti-bolan'ny tafika lehibe fa tsy nanao afa-tsy ny nandevina ny toekarena. Nanohitra aho fa ny miaramila, amin'ny lafiny maro, dia mitovy amin'ny famatsiam-bola ataon'ny governemanta amin'ny fampandrosoana teknolojia vaovao sy famokarana betsaka. Ampiako ihany koa fa, amin'ny asa 'famonoana na famonoana', ny tsatoka dia tsy avo kokoa raha resaka